Taratasy fiatoana akademika amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny taratasy taratasy akademika tsara indrindra ao amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Ahoana ny fampiasana serivisy fanoratana taratasy ho an'ny akademika mba hananana tombony betsaka indrindra amin'ny taratasinao
Ny olona iray izay te-ho tonga mpanoratra teny akademika dia tokony hahatakatra ny fomba fiasan'ny dingana famoronana ao ambadiky ny fanoratana teny akademika. Amin'ny tranga maro, miankina betsaka amin'ny karazana taratasy izany, na tatitra momba ny asa fikarohana na lahatsoratra. Ny sanganasa sasantsasany dia mitaky soratana mihoatra ny intelo alohan'ny hanombohan'ny zava-drehetra vita amin'ny gel; Midika izany fa mila manao drafitra faharoa na fahatelo ianao izay manamboatra ny habetsaky ny fitaovana omena.
Raha liana hianatra hanoratra ny taratasim-pianaranao manokana ianao, dia zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fizotrany rehetra dia mety ho mavesatra be. Ny tsara indrindra dia ny manatona ilay asa amin'ny fiezahana hanatsorana azy amin'ny alàlan'ny fitadiavana mpanoratra azo itokisana afaka manoratra lahatsoratra voalamina tsara sy voalamina ho anao. Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa mampiasa endrika mety indrindra hanoloranao ny mombamomba anao ianao. Soso-kevitra ihany koa ny hamaky fanamarihana vitsivitsy an-tserasera momba ny mpanoratra alohan'ny hanolorany tena amin'ny mpanoratra iray.
Raha toa ianao ka mpianatra manana fahalalana kely momba ny sahaninao dia afaka manampy amin'ny fanatontosana ny asa famoronana taratasy teny akademika ho toy ny tetikasa izany. Ny tetikasa dia fitaovana iray tena ilaina manampy anao ho lasa voarindra sy voarindra amin'ny tetikasanao. Amin'izany dia ho azonao atao ny misoroka ny mangataka andro rehefa tonga ny famitana tetikasa. Soso-kevitra hatrany ny hanombohana hevitra izay manana fahaiza-manao betsaka. Izany dia natao mba hahafahanao mampiasa an'io hevitra io amin'ny tetikasa manaraka izay misy ny fanoratana taratasim-pianarana.
Ny serivisy fanoratana taratasy an-tserasera dia hanome anao santionany amin'ny tarehin-tsoratra maromaro azonao raisina. Azonao atao ny mandinika ireo santionany amin'ny taratasim-pianarana natolotr'izy ireo ao amin'ny tranonkalany satria hanampy anao hahita ny endrika anehoan'izy ireo ny taratasin'izy ireo izany. Izy ireo koa dia hanome anao ny safidy hangataka fanampiana fanampiny amin'ny fanitsiana, fanitsiana na serivisy hafa ilaina amin'ny fanendrena anao. Arakaraka ny serivisy azonao angatahina amin'ny serivisy fanoratana taratasy momba ny teny akademika, ny fiomanana tsara kokoa hiatrehana ny tetikasan'ny taratasy momba ny teny akademika anao.
Zava-dehibe ny fanaovana enti-mody kely alohan'ny hanapahana hevitra momba ny serivisy hanomezana anao taratasy ara-pianarana. Hamarino tsara fa ny serivisy izay fidinao dia fantatra amin'ny fanomezana fitaovana tany am-boalohany sy mahaliana ary afaka mamokatra taratasy maharitra. Zava-dehibe ihany koa ny manamarina raha afaka manome anao drafitra sy drafitra masiaka ho an'ny taratasim-pianarana akademika ny serivisy.
Ampirisihina hatrany ianao hangataka olona iray hiara-miasa aminao hanitsy ny taratasim-pianaranao alohan'ny handefasana azy. Mety hisy fanitsiana maromaro avy aminao mba hahatratraranao ny karazan-taratasy taratasim-pianarana tianao ho soratana, saingy tena hisy izany manampy anao hanatsara ny kalitaon'ny taratasinao.
Azonao atao ihany koa ny mangataka ny serivisy fanoratana taratasy momba ny teny akademika anao hanampy anao amin'ny famoronana drafitra marokoroko ho an'ny taratasim-pianarana. Izany dia hanampy anao hahatsapa ny fomba ahafahanao mandeha manoratra ny taratasinao amin'ny alàlan'ny fanampiana anao hanao drafitra voalamina tsara sy amin'ny fanomezana anao hevitra tsara momba ny fomba ahafahanao manitsy ny taratasinao ary manome valiny ho an'ny mpanoratra ho an'ny famerenana amin'ny ho avy. Hanampy anao hahafantatra tsara izay antenaina rehefa manomboka manoratra ny taratasinao.
Ary farany, zava-dehibe ny mangataka tari-dàlana momba ny fehezan-teny akademika. Amin'ity fomba ity, azonao atao ny mahalala izay hotadiavina amin'ny karazana fanohanana ilainao hanoratanao ny taratasinao. Ireto torohevitra ireto dia hanampy anao hampiasa betsaka ny serivisy fanoratana taratasy ho an'ny teny akademika.